Dhaqtar hurday isaga oo qaliin ku jira oo la boggaadiyay | Radio Himilo
Home / Caafimaad / Dhaqtar hurday isaga oo qaliin ku jira oo la boggaadiyay
Dhaqtar hurday isaga oo qaliin ku jira oo la boggaadiyay
Posted by: Mahad Mohamed January 12, 2019
Himilo FM – Nin u dhashay dalka Shiinaha oo qaliinka sameeya ayaa hurday isaga oo ku jira howlgal qaliin bukaan, waxaana sawir muujinaya arrintaasi uu ku baahay baraha bulshadda.
Waxaa ka muuqda sawirka Luo Shanpeng oo ka shaqeeya isbitaalka People’s Hospital of Guiyang oo ku yaalla koonfur bari Shiinaha, waxaana la arkayay isaga oo hurdaya oo gacanta middig ka haya bukaanka lagu sameynayay qaliinka oo lagu sheegay inuu yahay soo galooti.
Kalkaaliso la shaqeynaysay dhaqtarka ayaa la tilmaamay inay qaaday sawirka. Waxay sheegtay kalkaalisada inay aragtida arrintaasi xannuun ku tahay iyadoo sawirka si weyn loogu baahiyay shabakadda WeChat ee Shiinaha oo ah sida Facebook-ga oo kale.
Dadka Shiinaha ayaa ku tilmaamay dhaqtarka inuu yahay halyeey iyaga oo ku macneeyay in sawirka uu muujinayo sida Mr Luo uga go’antahay nolosha bukaanka. Waxaa la xusay in dhaqtarka uu howlgalkaasi kahor galay 5 qaliin.
Qofka bukaanka ah ayaa dhaawac uu kaga yaaallay gacantiisa middig, waxaana marka dhaqtarka loo yeeray isaga oo aan nasan 20 saacadood uu sheegay inuu qaliinka gali karo oo uu badbaadinayo dhibanaha.
“Xaaladda way adkeyd, qaliinkana wuxuu ahaa mid si deg degg ah loogu baahnaa,” ayuu dhaqtarka Lou u sheegay warbaahinta Evening News.
Waxa uu intaa raaciyay dhaqtarka inuusan ku tala gelin hurdo laakiin uu doonayo in uu indha guduudsado.
Previous: Wax ka ogow baasaboorada ugu awoodda badan caalamka
Next: Liverpool oo u weecatay laacib ka ciyaara dalka Austria